Walk2Everything-PetFriendly,NBN, WIFI, Linen
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguPaul & De
*Kubonelelwe yonke ilinen*
*Inobubele kwisilwanyana sasekhaya, iYadi ebiyelwe ngasemva*
*NBN WiFi* Netflix
Indawo egqibeleleyo 2min ukuhamba ukuya eBlueys Beach. I-1min ukuya kwiivenkile, iikhefi, ivenkile yeebhotile kunye nePizza entle kakhulu. Hlala eMpuma ujongane nedesika kusasa (imibono yolwandle!), Yonwabele isidlo sakho sakusasa phantsi kweliso leentaka zalapha ekhaya. Uzilungiselele kwikhitshi egcwele ubungakanani, kunye nefriji enkulu (kunye nefriji yebha). Indawo eninzi yangaphandle. Yiza nomntwana wakho woboya - bamkelekile nabo!
Beka kwisitrato sokuhlala esithe cwaka-uhambe uye kuzo zonke izinto zalapha ekhaya. Hamba uye elunxwemeni ngemizuzu emi-2. Ipaki kwi-driveway, yokupaka iimoto ezingaphezu kwenye. Emva kwendlu kubiyelwe, ilungele izinja ezincinci. (Ungahamba nenja yakho elunxwemeni ngo-5am-9am)
Sibonelela zonke ilinen, iitawuli kunye nezinto zokulala. Igumbi lokulala elisezantsi (ibhedi enye) lahlukile kwindawo yokuhlala ephezulu, kodwa linendlu yangasese esezantsi (kwindawo yokuhlamba impahla).
Kukho ishawari yangaphandle (ebandayo) xa ubuya elwandle.
Indawo yokuhlala ekumgangatho ophezulu isanda kufakwa (2019) i-air-conditioning ye-reverse cycle, kunye neendawo zokuhlala kunye namagumbi aphezulu okulala anabalandeli besilingi. Igumbi lokulala elisezantsi linefeni yasehlotyeni kunye nesifudumezi esincinci sasebusika.
Iingcango zendlu kunye neefestile zikhuselwe ngokupheleleyo.
Ngexesha lasehlotyeni kudla ngokubakho impepho yolwandle ukuze uyonwabele.
Ikhaya lethu linesikhenkcezisi esipheleleyo, umphezulu ogcweleyo we-oveni yombane kunye ne-oveni> Kukwakho nemicrowave, itoaster, iketile kunye nekofu. Sibonelele ngeemela ezisemgangathweni, i-cookware a, isitya kunye ne-cutlery, iKitchen ixhotyiswe ngokupheleleyo, ngoko ke ukhetho lukhona ukwenza konke ukutya kwakho ekhaya ukuba uyathanda.
Indawo yethu yokuhlamba impahla inomatshini wokuhlamba impahla ngaphambili, umatshini wokomisa iimpahla kunye nendlu yangasese yesibini. Ngaphandle kukho intambo yeempahla. Kukho iimpahla zokubeka umoya ezigcinwe kwiLaundry.
Ezantsi sinetafile yokutyela yangaphandle kunye neendawo zokuphumla zelanga ezimbini ezisetyenziselwa wena.
Nceda uqaphele: Ikhaya lethu alilungiselelwanga iintsana, njengoko kukho izinyuko zangaphakathi ezingenalo isango lokhuseleko.
4.95 ·Izimvo eziyi-99
IBlueys beach inomcu omncinci omkhulu wecafe enayo yonke into oya kuyidinga ngokuhlala okufutshane kubandakanya ivenkile eqhelekileyo - (izitolo ezinkulu ezinkulu kunye neendawo zokuthenga ezinkulu ziyafumaneka eForster ngaphantsi kwe-20 min drive North)
Umbuki zindwendwe ngu- Paul & De
Cyclists, World Travellers, House-Sitters, Rescue Animal Carers, Land for Wildlife Carers, AirBnB hosts. We usually travel with our bicycles, and seek out on arrival on two wheels to discover the countryside, the hills and the cities. Favourite cycling cities so far: Girona, Annecy, Argendenes (sssh!), O'Incio, Callosa de Ensarria, Puerto de Ancares, New York City, Woodstock VT, Adelaide, Bright VIC, Lucca Italy, Bormio Italy.... actually, yeah, there are far too many to list. We are both vegetarians who love to stay fit.
Cyclists, World Travellers, House-Sitters, Rescue Animal Carers, Land for Wildlife Carers, AirBnB hosts. We usually travel with our bicycles, and seek out on arrival on two wheels…
Siqhagamsheleka ngefowuni, iSMS okanye Wh@ts@pp ngeli xesha ulapha-zijonge ngokwakho xa ufika. Uqhagamshelwano lwasekuhlaleni ngayo nayiphi na imiba esingakwaziyo ukuyicombulula.
UPaul & De yi-Superhost
Inombolo yomthetho: PID-STRA-2535
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Blueys Beach